ဘေဘီလေးတွေ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ - Hello Sayarwon
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » အရေပြားကျန်းမာရေး
Update Date မေ 25, 2020 .2mins read
ဘေဘီလေးတွေ ဆော့ကစားရင်းဖြစ်ဖြစ် မြက်ခင်းလို နေရာမျိုးတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်းက ဖြစ်ဖြစ် မတော်တဆ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတာမျိုး ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ဘေဘီလေးကို ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ဖေဖေမေမေတို့ရေ….
ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တဲ့အခါ သက်သာစေဖို့
ဘေဘီလေးကို ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲ ထိခိုက်မှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်
သွားတိုက်ဆေး– ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတိုက်ဆေး ပွတ်ပေးတာက လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံး တစ်ရပ်ပါ။ ဒါက အရေပြားယားယံတာနဲ့ တဆစ်ဆစ် နာတာကို သက်သာစေမှာပါ။
အသီးတစ်ခုခု – ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ခံရတဲ့အခါ အိမ်မှာရှိတဲ့ အသီးတစ်ခုခုကို ထက်ခြမ်းပိုင်းပြီး ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ပွတ်ပေးလိုက်ပါ။ အသီးတွေမှာ ပါတဲ့ အက်ဆစ်က ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာကြောင့် အရေပြား ယားယံတာ၊ ရောင်ရမ်းတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပပ် – ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ရှားစောင်းလက်ပပ် အတွင်းသားနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်ပါ။ အရေပြား ယားယံတာ နဲ့ နီမြန်းတာတွေကို သက်သာစေမှာပါ။
aspirin – ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို aspirin ဆေးကို ​ကြိတ်ပြီး ရေနဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်လို့ လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေမှာပါ။
ရေခဲဝတ် ကပ်ပါ – ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကို သိသိချင်း ရေခဲတုံးတွေကို တဘက်စသန့်သန့်ထဲထည့်ပြီး ကပ်ပေးပါ။ ဒီလို ကပ်ပေးတာက ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တာ​ကြောင့် အရေပြား ယားယံတာနဲ့ ရောင်ရမ်းနီမြန်းတာကို သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
သံပုရာရည် – ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး လိမ်းကျံပေးတာကလည်း အရေပြားယားတာနဲ့ နီမြန်းတာကို သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ပျားရည် – ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တဲ့နေရာကို ပျားရည်ခပ်ပါးပါးလေးလိမ်းပေးလို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် ရေအေးအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါ။
tea bag – အသုံးပြုပြီးသား tea bag လေးတွေကို လွှင့်မပစ်ဘဲ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားပေးပါ။ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ ဒီ tea bag လေးနဲ့ ကပ်ပေးလိုက်ရုံပါ။
ဆားရည် – ဆားက အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေး ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ ဆားတစ်ဇွန်းကို ရေထဲထည့်လို့ မွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဆားရည်လေးနဲ့ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ပွတ်ပေးလိုက်ရုံပါ။
သခွားသီး – သခွားသီးကို ခပ်ပါးပါးလေးလှီးလို့ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တဲ့နေရာမှာ ကပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
သံလွင်ဆီ – သံလွင်ဆီကို ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာကို သက်သာစေမှာပါ။
နို့မှုန့် – နို့မှုန့်ကို ရေနည်းနည်း ဆားနည်းနည်းနဲ့ ရေဖျော်ပြီး ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တဲ့နေရာကို လောင်းပေးရုံပါ။ ဒီလိုလုပ်တာက နို့မှုန့်မှာပါတဲ့ အင်ဇိုင်းကြောင့် ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ပြောင်းမှုန့် – ပြောင်းမှုန့်ကို ရေနဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်လို့ ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားရင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။
ရေဆေးချပါ – ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း ရေဆေးချပေးတာကလည်း ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အာလူး – ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ခပ်ပါးပါးလှီးထားတဲ့ အာလူးကို ကပ်ပေးလိုက်ရုံပါ။ ဒီလို ကပ်ပေးတာာက ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာ​ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အရေပြား ယားယံတာ နဲ့ အဖုအပိမ့် ဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ သုံးလို့ ဘေဘီလေးအရေပြားက ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ခံရတာကို သက်သာအောင် လုပ်ပေးလိုက်စို့နော် မေမေမ ဖေဖေတို့ရေ
Relief For Ant Bites:7Easy Home Remedies https://www.homepest.com/blog/7-home-remedies-for-ant-bites Accessed Date3May 2020
Fire Ants Stung Me. What Should I Do? https://www.webmd.com/allergies/fire-ant-stings Accessed Date3May 2020
ဘေဘီလေးတွေ လက်စုပ်တာ စိုးရိမ်ရမလား…..
ဘေဘီလေး နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်
စိုးရိမ်ရတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ဆိုတာ
စိုးရိမ်ရတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ..... ချောင်းခြောက်ဆိုးတာက သာမန်အားဖြင့်တော့ စိုးရိမ်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်.......
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး, အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ဩဂုတ် 19, 2021 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တံထွေး အများကြီးထွက်တာ ပုံမှန်ပဲလား…….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တံထွေး အများကြီးထွက်တာ ပုံမှန်ပဲလား....... ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ပုံမှန် အခြေအနေပါ။
အခြားသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း အကြောင်းအရာများ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကျန်းမာရေးပြဿနာများ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဩဂုတ် 16, 2021 .2mins read
ဆားရည် နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတဲ့အခါ ဆားရည်က အကုန်အကျ သက်သာပြီး လွယ်ကူတဲ့ ကုသနည်း တစ်ရပ်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့...................
သွားနှင့် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး ဩဂုတ် 13, 2021 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 8, 2021 .2mins read
ဘေဘီလေးတွေ သီချင်းဆိုခြင်း ကနေ ဘာတွေရရှိမလဲ……